किन किङ खान शाहरुख संसारकै चर्चित पोर्न स्टार बन्न चाहन्थे? - Dainik Online Dainik Online
किन किङ खान शाहरुख संसारकै चर्चित पोर्न स्टार बन्न चाहन्थे?
प्रकाशित मिति : १ भाद्र २०७८, मंगलबार २ : ३९
बलिउडका सुपरस्टार तथा किङ खानको नामले परिरिचत भारतीय अभिनेता शाहरुख खान कुनै समय संसारकै चर्चित पोर्न स्टार बन्न चाहन्थे। सन् २००९ मा गुरु अरिन्दम चौधरीको ‘डिस्कभर द डायमण्ड इन यु’ किताबको विमोचन गर्न शाहरुख दिल्ली गएका थिए सोही विमोचनको क्रममा उनले पोर्नस्टार बन्ने इच्छाबारे खोलेका थिए।
भारतीय संचारमाध्यम डिएनएको रिर्पोट अनुसार शाहरुखले भनेका थिए, ‘म सधैं पोर्न स्टार बन्न चाहन्थे। पोर्न स्टार बन्न म सकरात्मक भावना र स्पष्टताको साथ काम गर्नेछु।’ आफूमा पोर्न स्टार बन्ने चाहना शाहखरुलाई कहाँबाट आएको त्यो पनि उनले खुलाएका थिए।
वास्तवमा हलिउडका रेम्बो अर्थात् हलिउड एक्सनस्टार अभिनेता सिल्भेस्टर स्टेलोन पनि कुनैबेला पोर्नस्टार थिए। सो किताब विमोचन कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘म चर्चित हलिउड अभिनेता सिल्भेस्टर स्टेलोनको ठूलो फ्यान हुँ। उनी हलिउड स्टार हुनुअघि पोर्न स्टार थिए।’
शाहरुखको पोर्नस्टार बन्ने इच्छाबारे उनी आलोचित बनेका थिए।
सिक्रेट स्टार बिष्णु माझीको ‘दशैँ–तिहार आइसक्यो’ले चर्चा बटुल्दै (भिडिओ)
मदिराले लठ्ठ ओस्कार विजेता निकोलास केजलाई बारबाट जबर्जस्ती निकालियो (भिडिओ)
श्रीपेच लुट्न खोज्ने खेमबहादुरलाई ट्रोल गर्दै भन्न थालियो राजा!
‘नो एमसीसी’ गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक